Isbeddelka Cimilada Dunida: TAARIIKH KOOBAN / Isbeddelka Cimilada
Aragtida ku aaddan isbeddelka cimilada adduunka; taariikh ahaan waxay soo martay marxalado kala geddisan. Ma ahayn wax mar qura iska shaacay, cilmi mar kaliya la daah-furay ama tijaabooyin iska fudfududaa oo muddo kooban lagu ogaaday.
Waxay ahayd 1824kii kolkii ugu horraysay oo saynisyahannada ku xeeldheer cimiladu ay dareemaan xawliga isbeddelka cimilada oo sii kordhayay sanadba sanadka ka dambeeya; isla markaasna waxaa xilliyadii ugu horreeyay bilawday hadal haynta ‘ISBEDDELKA CIMILADA’ iyo aafooyinka ka dhalan kara.
Dadaallo badan iyo cilmi baarisyo dheeri ah ayaa deedna lagu xaqiijiyay sanadku markuu ahaa 1861 in CO2 iyo H2O ( Kaarboon 2 Ogsayd iyo Uumi-biyood) ay qayb ka yihiin walxaha sababa isbeddelka cimilada. Isla qarnigaasu intuusan dhammaanna waxaa kaloo cilmi ahaan loo ogaaday in ay Atmosfeerka dhulkeennu ay ku sii badanayaan hawooyin xaddi badan oo ka mid ahi uu bani-aadamku sababtooda leeyahay. Hawooyinkaasu waxaa loogu magac-daray Greenhouse Gases (GHG) waxayna caan ku noqdeen xannibaadda ama horjoogsiga kala-bar kulkii iyo tamartii Dhulku uu dib isaga celiyay; taas oo keentay in uu heer-kulkii Dhulka oo qarniyaal ku sugnaa xaalad caadi ah uu sare u sii kaco.
1938dii waxa ay saynisyahannadu ogaadeen in cunsurka CO2 uu yahay kan ugu daran hawooyinka GHG-ka uuna gaarsiiyay heer-kulka dunida (Global Temperature) 20C wax ku dhow.
Ilaa iyo 1970meeyadiina waxaa soo shaac baxayay cunsurro kale oo ka mid ah hawooyinka GHG-ka ee atmosfeerka ku sii badanaya. Sidoo kalena waxaa guul noqotay dejinta hab-cilmiyeedyo lagu cabbiro xaddiga, cufka iyo weliba muddada ay hawooyinkaasu atmosfeerka ku sugnaan karaan. Bogga Wacyi Gelinta Isbeddelka Cimiladu wuxuu soo diyaarin doonaa mawduuc gaar ah oo ku saabsan hawooyinka GHG-ka iyo saamaynta bani-aadamkaba haddii uu Eebbaha Awoodda Lihi Oggolaado.
Cilmi baarisyada iyo xaqiijintii isbeddelka cimilada dunida oo aad isu soo taraysay; ayaa waxaa ay gaartay heer aan la dhayalsan Karin, indhahana laga qarsan Karin. Waxaa si dhab ah loo ogaaday in ay tahay mushkilad weyn oo asiibi karta dal walba iyo degaan walba, ha ahaado hodan ama ha ka mid ahaado dalalka loogu yeero ‘Dunida Saddexaad’. Dunida oo sii kululaataa waxay keentaa biyo yaraan, cunto yaraan, abaaro, kulayl iyo qabow xad-dhaaf ah, duufaanno, nabaad-guur, qax, dagaallo iyo musiibooyin kale; sidaa darteedna dalalka dunidu waa ay garwaaqsadeen; waxaana shirkii ugu horeeyay oo heer dawli ah loogana hadlayay isbeddelka cimilada lagu qabtay Geneva sanadkii 1979kii.
1988dii waxaa la aasaasay hay’adda caalamiga ah ee IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Ururkan oo ay shaqadiisu tahay cilmi baaris iyo diyaarinta war-bixinno ku aaddan isbeddelka cimilada ayaa waxaa ku bahoobay ilaa 194 dawladood, wuxuuna war-bixintiisii ugu horreeyay soo saaray sanadkii 1990.
Wixii dhiig lahow kaca haddii ay noqotayna; waxaa Qaramada Midoobay lagaga dhawaaqay urur-weyne u qaabilsan isbeddelka cimilada dunida sanadku markuu ahaa 1992. Ururkaas waxa ay summaddiisu tahay UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Intaas ka dib; ilaa iyo shirkii Paris 2015 ee looga arrinsanayay isbeddelka cimilada dunida, ma ayan yaran shirarkii, go’aammadii iyo ballan-qaadyadii la soo maray.
Waxaa kullammo kala gaddisan lagu kala qabtay Newyork 1990, Kyoto 1997, Bali 2007, Copenhagen 2009, Caucun 2010, Durban 2011, Doha 2012, Warsow 2013, iyo meelo kaleba. Muhimmadda ugu weyn oo baadi-goobka loogu jiro waa in la helo nidaam la isku wada raacsan yahay oo lagu xakamayn karo qiiqa iyo hawooyinka bani-aadamku sida xad-dhaafka ah ugu sii daynayo atmosfeerka si loo yareeyo khataraha ka dhalan kara iyo musiibooyinka ay sababi karaan, in la helo biyo iyo cunto dadka iyo duunyadaba ku filan, in lala qabsado isbeddelka cimilada, in weliba goobaha ay musiibooyinku ka dhacaan gurmadyo ka hortag iyo ka kabashaba leh lala garab istaago , iyo in weliba waddamada horey u maray ay dhaqaale iyo tababbarraba ugu deeqaan waddamada dhaqaalahoodu hooseeyo.
Ugu dambayntiina; waxaa shir-weynihii aadka loogu hanka weynaa ee lagu qabtay Paris Dec 2015 ka soo baxay qodobbo la oran karo waa wax ku ool haddii si daacad ah ay dhammaan dawladuhu isugu xilqaamaan fulintooda. Aragtidayda; qodobbadaas waxaa ugu muhiimsanaa isla qaadashada yaranta qiiqa iyo hawooyinka kharribaya cimilada si heer-kulka cimiladu uga yaraado 20C (oo uusan dhaafin 1.5 Degrees C).
Intaas ayaan ku soo koobaynaa waanna idiinka mahad celinaynaa akhristayaasha iyo dhammaan bahda boggan BOGGA WACYI GELINTA ISBEDDELKA CIMILIDA. Taladiinna iyo faalladiinuba waa muhiim.
AbdulAziiz Haji Bashiir
Posted by Wacyi-Gelinta Isbeddelka Cimilada at 7:58 PM